मेयर लड्न कै लागि कोरियाबाट छुट्टीमा ! भन्छन् ‘जितें भने त यतै बस्नु परिहाल्यो, हारे फर्कन्छु’
मेयर लड्न कोरियाबाट छुट्टीमा ! भन्छन् ‘जितें भने त यतै बस्नु परिहाल्यो, हारे फर्कन्छु’
ताप्लेजुङ — चार वर्षअघि कामदार भिसामा कोरिया पुगेका फुङलिङ नगरपालिका–११ फावाखोलाका हेम्बु इजम ५७ दिनको छुट्टी लिएर घर आए । मासिक साढे दुई लाख आम्दानी हुने कामबाट छुट्टी लिएर उनी घर आउनुको खास कारण हो– स्थानीय तहको चुनाव ।
ठूला दलले प्रमुख पद नदिने र सानो पदमा उठ्दा मत सुरक्षित नहुने उनको पार्टीको बुझाइ छ । इजम किरात याक्थुम चुम्लुङ दक्षिण कोरियाका सल्लाहकार पनि हुन् ।
उम्मेदवारी मनोनयनपछि कार्यकर्ता भेटघाट, आमसभामा हिँडिरहेका उनले संगठन मजबुत बन्दै गएको दाबी गरे । जितेमा नगर प्रमुखले पाउने मासिक पारिश्रमिक प्रत्येक महिना प्रत्येक वडाको विकासमा खर्चने उनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजनीति सामाजिक सेवासमेत भएकाले कोरियामा कमाएको श्रमले भात खाने तर सरकारले घोषणा गरेको सेवा जनतालाई वितरण गर्ने उनले अठोट गरेका छन् । आफूले उम्मेदवारी दिएको जातीय पार्टी भन्ने बुझाइ जनतामा भएकाले त्यो भ्रम चिर्ने प्रयासमा रहेको उनले बताए ।
२०७९ बैशाख २६, सोमबार प्रकाशित0Minutes 182 Views